Wadada wadnaha ah ee plaza ayaa noqotay tan ugu badan ee kudhaco shilka ugu badan oo sababa khasare maal iyo mid moodba ,gaar ahaan inta u dhaxaysa garoonka diyaradaha, hutelka nasteexo iyo goolada.
Sida laysla qirsanyahay had iyo goor waxa shilka sababta.
1-Darawal xumo, wado xumo, gaadiid xumo,iyo hagid la,aan, sadexdan ayaa saamaynta ugu badan kuleh inuu shil dhaco .
hadaba iyadoo sadexdaaba aynu nahay saaxiib dhaw magalooyinka kale ay burco kalasimantahay, hadana wadadaas iyo kuwo kale ee halbawlaha dhexmara magalada waxay ubaahinyihiin in si deg-dega wax looga qabto oo ay helaan dhaman shuruudaha looga bahanyahay wado mashquula oo magalo dhexmarta tusaale:-
Ishaarooyin ,Sarakiil ku xeel dheer nidamka ilaalinta nabadgelyada wadooyinka,in lajoojiyo ama ganaax lagusoo rogo dadka dhigta wadada dhinacyeeda wakhti gaarana loo ogolado, in lahelo meel nabadgelya ah oo dadku baabuurta dhigtaan,in dadka loo sameeyo dhinac ay lugeeyaan (side walk) ,
in lajoojiyo suuqa dhexe inay baabuurta waaweyni galan wakhti gaarana loosameeyo iyaga ukhaasa,In sharci adag lagasoo asaaro dadka qaadaya masuuliyada wado marista,
In hayaadaha kushaqada leh arinkaas meel saaran,dhaliisha ay ku leeyihiina ay ka jawaaban hadii lawaayana way qaban karaane dadka shacabka akhi iskood isu abaabulaan baahidaana ka jawaaban.
Ugu danbayn waxan kutalin laha in ummadu ku baraarugto dhibatooyinkas sidii xalwaara looga gaadhilahaa wado-xumadas,gaadiid xumadaas,iyo sarawak Canada’s is biirsadey.
W/Q Shaafi H Dhiibsane